Iindaba - uXi ukhokelela ekuvulweni kwakhona kwezoqoqosho eTshayina kwindlela ezinzileyo
I-BEIJING-Uvulindlela ekuphenduleni kwe-COVID-19, i-China ngokuthe ngcembe iyachacha kumothuko wobhubhane kwaye ihamba ngononophelo kumkhondo wayo wokuvulwa kwakhona kwezoqoqosho njengoko uthintelo kunye nolawulo lobhubhani sele luyinto eqhelekileyo.
Ngezalathi zezoqoqosho zamva nje ezikhomba kuphuculo olungaphaya kwebhodi kuqoqosho olukhulu, uqoqosho lwesibini ngobukhulu emhlabeni lujonge ngaphaya kolungelelwaniso phakathi kokuqalisa ngokutsha uqoqosho kunye nokuqulatha intsholongwane.
Ekhokelela isizwe ekwakhiweni koluntu oluchubekileyo ngokulinganayo kuzo zonke iinkalo, u-Xi, ongunobhala jikelele weQela lamaKomanisi eKomiti ePhakamileyo yaseTshayina kunye nosihlalo weKomishoni yoMkhosi ePhakathi, uye wadwelisa ikhosi ebhekiselele kwinguqu ekumgangatho ophezulu kunye nophuhliso oluzinzileyo.
IMPILO YABANTU KUQALA
"Amashishini akufuneki aphumle kwaye kufuneka aqhubeke nokufezekisa ngokungqongqo uthintelo kunye nolawulo lobhubhane ukuqhubela phambili ukuqalisa umsebenzi ngelixa eqinisekisa ukhuseleko kunye nempilo yabasebenzi babo," utshilo.
Xi, osoloko ebeka impilo yabantu kuqala ekuqhubeleni phambili ukuqalisa kwakhona komsebenzi kunye nemveliso.
“Asingaze sivumele impumelelo esiyenze nzima ngaphambili kulawulo lobhubhani lwenziwe ilize,” utshilo u-Xi kwintlanganiso.
UKUJIKA IMICELI-MNGENI IBE LITHUBA
Njengolunye uqoqosho lwehlabathi, ukuqhambuka kwe-COVID-19 kuye kwachaphazela uqoqosho lwasekhaya lwase-China kunye nentlalontle.Kwikota yokuqala, isambuku semveliso yangaphakathi eTshayina safumana ikhontrakthi eyi-6.8 yeepesenti ngonyaka.
Nangona kunjalo, ilizwe likhethe ukujongana nomothuko ongenakuthintelwa kunye nokujonga uphuhliso lwalo ngendlela ebanzi, yentetho kunye nembono yexesha elide.
“Iingxaki kunye namathuba ahlala ehleli ecaleni.Nje ukuba woyiswe, ingxaki lithuba, ”utshilo uXi xa wayethetha namagosa alapha kwiphondo laseZhejiang, indawo yoqoqosho esempuma yeTshayina, ngo-Epreli.
Nangona ukwanda ngokukhawuleza kwe-COVID-19 kumazwe angaphandle kuphazamise uqoqosho lwamazwe ngamazwe kunye norhwebo kwaye kwazisa imiceli mngeni emitsha kuphuhliso loqoqosho lwaseTshayina, ikwabonelele ngamathuba amatsha okukhawulezisa uphuhliso lwelizwe kwisayensi kunye netekhnoloji kunye nokuqhubela phambili ukuphuculwa kwemizi-mveliso, utshilo.
Imingeni kunye namathuba aye ahamba kunye.Ngexesha lo bhubhani, uqoqosho lwedijithali lwelizwe esele lukhula ngamandla lwamkele ukunyuka okutsha njengoko abantu abaninzi kuye kwafuneka bahlale ekhaya kwaye bandise imisebenzi yabo ye-intanethi, bekhuthaza ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha efana ne-5G kunye necomputing yamafu.
Ukuxhakamfula eli thuba, izicwangciso ezinkulu zotyalo-mali zenziwe kwiiprojekthi “zeziseko zophuhliso ezitsha” ezifana nothungelwano lolwazi kunye namaziko edatha, ekulindeleke ukuba axhase ukuphuculwa kwemizi-mveliso kwixesha elizayo nokukhulisa abaqhubi abatsha bohlumo.
Ukubonakalisa umkhwa, isalathisi semveliso yenkonzo yokusasazwa kolwazi, isoftware kunye neenkonzo zobuchwepheshe bolwazi zenyuka ngepesenti ze-5.2 ngonyaka ngo-Ephreli, zibetha i-4.5-ipesenti yehla yecandelo lenkonzo jikelele, idatha esemthethweni ibonise.
Phantsi kobunkokeli buka-Xi, i-China iye yaxhathisa indlela yakudala yokuphuhlisa uqoqosho ngeendleko zokusingqongileyo kwaye ijonge ukushiya ilifa eliluhlaza kwizizukulwana zayo ezizayo, ngaphandle komothuko wezoqoqosho ongazange ubonwe ngaphambili oziswa ngubhubhane.
“Ukulondolozwa kwendalo kunye nokukhuselwa kwendalo zizizathu zangoku eziya kuxhamlisa izizukulwana ezininzi ezizayo,” utshilo uXi, malunga namanzi achumileyo kunye neentaba ezintle njengempahla yexabiso.
Ngasemva kwendlela eqinileyo yaseTshayina yophuhliso lohlaza kukusukela ubunkokeli obuphezulu bokufikelela kuluntu olunempumelelo ngokuphakathi kuzo zonke iinkalo kunye nokubona kwangaphambili ukugcina ugxininiso lobuchule bokuphucula imeko yendalo kwixesha elide.
Okuninzi kufuneka kwenziwe ukukhawulezisa ukuqaliswa kwezinto ezintsha kunye nokomeleza ukuphunyezwa kwamaziko ukunceda ukwenza indlela eluhlaza yokuvelisa kunye nokuphila, u-Xi uye wagxininisa.
Ixesha lokuposa: May-15-2020
iStainless Steel Investment Casting Supplier, Amacandelo okugaya i-Stainless Steel Cnc, Stamping Supplier, Ukuphosa ubhedu, Isitampu ngokweSiko, Amacandelo Extrusion Precision,